1 Pita 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Pita Nke Mbụ 1:1-25
A mụrụ anyị ọzọ ka anyị nwee ezigbo olileanya (3-12)
Dịrịnụ nsọ ebe unu bụ ụmụ na-erubere Chineke isi (13-25)
1 Mụnwa, bụ́ Pita, onyeozi+ Jizọs Kraịst, na-edetara unu akwụkwọ, unu ndị bi nwa oge n’ụwa a, ndị bi ebe dị iche iche na Pọntọs, Galeshia, Kapadoshia,+ Eshia, na Bitinia. Unu bụ ndị Chineke họọrọ. 2 Ọ bụ ya bụ Nna anyị. Ọ họọrọ unu maka na ọ bụ ihe o bu n’obi ime kemgbe.+ O ji mmụọ nsọ doo unu nsọ,+ ka unu wee na-erubere ya isi, dịkwa ọcha n’ihi ọbara Jizọs Kraịst.+ Ka Chineke meere unu amara, meekwa ka udo dịrị unu. 3 Ka e too Chineke bụ́ Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ bụ maka nnukwu ebere o meere anyị mere o ji mụọ anyị ọzọ+ ka anyị nwee ezigbo olileanya+ maka na a kpọlitere Jizọs Kraịst n’ọnwụ.+ 4 Olileanya a bụ inweta ndụ* a na-enweghị ike ịla n’iyi, nke a na-emerụghị emerụ, nke na-anaghịkwa emebi emebi.+ E doweere unu ya n’eluigwe.+ 5 Chineke ji ike ya na-echebe unu maka na unu nwere okwukwe. Ọ na-echebe unu ka ọ zọpụta unu. A ga-eme ka a mata ihe niile gbasara nzọpụta a n’oge ikpeazụ. 6 Ihe ndị a mere unu ji na-aṅụrị ezigbo ọṅụ, n’agbanyeghị na unu ataala ahụhụ obere oge ugbu a n’ihi ọnwụnwa dị iche iche bịaara unu.+ 7 Ihe mere ọnwụnwa ndị a ji bịara unu bụ ka a mara na okwukwe unu siri ezigbo ike.+ Ụdị okwukwe a bara uru karịa ọlaedo nke na-ala n’iyi n’agbanyeghị na e ji ọkụ nụchaa ya. Ọ ga-emekwa ka e too unu, sọpụrụ unu, unu adịkwa ebube mgbe a ga-ekpughe Jizọs Kraịst.+ 8 Ọ bụ eziokwu na unu ahụtụbeghị Kraịst, ma unu hụrụ ya n’anya. Ọ bụ eziokwu na unu anaghị ahụ ya anya ugbu a, ma unu kweere na ya, na-aṅụrịkwa ezigbo ọṅụ, ọṅụ nke ọnụ na-agaghị akọwali, nke dịkwa ebube. 9 N’ihi na o doro unu anya na okwukwe unu ga-eme ka a zọpụta unu.*+ 10 Ndị amụma, ndị buru amụma banyere amara Chineke meere unu, jụsiri ajụjụ ike gbasara nzọpụta a, chọsiekwa ike ịmata gbasara ya.+ 11 Chineke ji mmụọ nsọ gwa ha na Kraịst ga-ata ahụhụ+ nakwa na ọ ga-emecha dịrị ebube. Ọ bụ ya mere ha ji na-agba mbọ ka ha chọpụta ihe ga-eme Kraịst na mgbe ihe ahụ ga-eme ya.+ 12 Chineke mere ka ha ghọta na ọ bụghị onwe ha ka ha na-ejere ozi, kama, na ọ bụ unu ka ha na-ejere ozi. Ọ bụ ha dere gbasara ihe ndị ahụ e kwusaara unu. Ọ bụkwa mmụọ nsọ e si n’eluigwe zite nyeere ndị zisaara unu ozi ọma aka.+ Ọ na-agụsikwa ndị mmụọ ozi ike ịma gbasara ihe ndị a. 13 N’ihi ya, keenụ ájị̀ n’ume maka ọrụ.+ Na-echenụ echiche nke ọma n’ihe niile.+ Nweenụ olileanya na Chineke ga-emere unu amara mgbe Jizọs Kraịst ga-egosi ike ya. 14 Unu bụzi ụmụ Chineke, ndị na-erubere ya isi. Kwụsịnụ ịna-eme ihe ọjọọ na-agụ unu agụụ oge ahụ unu na-amaghị ihe ọ bụla gbasara Chineke. 15 Kama ịna-eme ihe ọjọọ, dịrịnụ nsọ n’ihe niile unu na-eme,+ otú ahụ onye kpọrọ unu dị nsọ. 16 N’ihi na e dere, sị: “Unu ga-adị nsọ, n’ihi na adị m nsọ.”+ 17 Ọ bụrụkwa na unu na-arịọ Nna anyị arịrịọ, onye na-ekpe onye ọ bụla ikpe maka otú o si kpaa àgwà, onye na-anaghịkwa ele mmadụ anya n’ihu,+ na-akpanụ àgwà otú na-egosi na unu na-atụ egwu Chineke+ n’oge unu bi nwa oge n’ụwa a. 18 N’ihi na unu ma na ọ bụghị ihe ndị nwere ike imebi emebi, dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, ka e ji napụta unu,*+ unu akwụsị ibi ndụ na-enweghị isi na ọdụ nna nna unu hà kụziiri unu. 19 Kama ihe e ji napụta unu bụ ọbara+ Kraịst,+ nke pụrụ iche, nke dị ka nke nwa atụrụ a na-emerụghị emerụ, nke na-enweghịkwa ntụpọ.+ 20 N’eziokwu, Chineke ahọpụtala Kraịst tupu a tọọ ntọala ụwa,+ ma e mere ka a mara gbasara ya n’ọgwụgwụ oge a n’ihi unu.+ 21 A kpọlitere ya n’ọnwụ,+ meekwa ka ọ dịrị ebube.+ Unu sikwa n’aka ya kwere na Chineke.+ N’ihi ya, nweenụ okwukwe ma chere Chineke. 22 N’ihi otú unu si na-eme ihe okwu Chineke bụ́ eziokwu kwuru, unu asachaala onwe unu,* unu hụkwara nnọọ ibe unu n’anya ka ụmụnne.+ Ugbu a, jirikwanụ obi unu niile hụ ibe unu n’anya.+ 23 N’ihi na a mụọla unu ọzọ.+ E si ná mkpụrụ na-enweghị ike ịnwụ anwụ* mụọ unu, ọ bụghị mkpụrụ nwere ike ịnwụ anwụ.+ E ji okwu Chineke, onye dị ndụ, onye na-adịkwa ndụ ruo mgbe ebighị ebi, mụọ unu.+ 24 N’ihi na “mmadụ* niile dị ka ahịhịa. Ebube ha niile dịkwa ka ifuru ahịhịa. Ahịhịa na-akpọnwụ, okooko ya na-adapụkwa, 25 ma okwu Jehova* na-adịru mgbe ebighị ebi.”+ Ọ bụ “okwu” a bụ ozi ọma e zisaara unu.+
^ Na Grik, “ihe nketa.”
^ Na Grik, “gbapụta unu.”
^ Ya bụ, mkpụrụ nke na-eme ka a dị ndụ.
^ Na Grik, “anụ ahụ́.”